Zvinodiwa zvinosanganisira Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, Gungwa Rakafa, Ha Long Bay
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba kwekushanya » Zvinodiwa zvinosanganisira Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, Gungwa Rakafa, Ha Long Bay
Kufamba kwekushanya • African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mufananidzo wechikwereti: lzf / Shutterstock
Nedzimwe nyika dzichitanga kusimudza zvinorambidzwa vafambi vakabaiwa majekiseni, maHashtag e Instagram ezvakakurumbira mashura echisikigo anoratidza kuda kwevashanyi kufamba. Imwe kambani muUK inoona nezvekuchengetedza magetsi yakaburitsa mushumo.
MaAmerican, maEuropean, maChinese, maJapan Vafambi vari kuverenga mazuva kuti vaongororezve nyika zvakare mune yakapfuura COVID-19 chaiyo.
Hash Tags pa Instagram chiratidzo chakanaka apo vafambi vangangoda kuenda zvakare, uye Niagara Falls padhuze neYosemite Park uye iyo Grand Canyon varikunyora runyorwa
Nehurombo maPiramidhi Makuru eGiza akagamuchira mashoma maHashtag pa Instagram panguva yedambudziko riri kuenderera, asi kutonga pamusoro pekuzivikanwa kwemapiramidhi izvi zvichachinja, kana pasi rese ravhurwa
Zvishoma zvinodiwa pa COVID yekushanya kwekushanya inzvimbo senge Mount Kilimanjaro, uye Victoria Falls. Iyi ndiyo ligi yakafanana yakagadzirira kukwira manera e Instagram seKomodo Island, Angel Falls muVenezuela kana Great Barrier Reef muAustralia.
Iyo yakawanda nhamba yekudzivirira muUnited States, pamwe nekuvhurwa kwenyika kuti ive yekufamba mudzimba, yakadzosera vashanyi veAmerica munzira uye inoratidza.
Zvakare Iceland yakavhurika vashanyi uye Mwenje yekuchamhembe yakave inodiwa pakati pevaya vanotumira ku Instagram.
Gomo Everest muNepal inoramba iri nzvimbo yemashiripiti ye Instagram. Anouya Mafashoni Kuratidzira pamusoro pehurefu hwakareba kwazvo pasirese kuchawedzera Guinness World Record kumufananidzo uyu.
Iwo Akanyanya 'Akarukwa Zvakasikwa Zvishamiso izvozvi ndeizvi:
Inonyanya kufarirwa Natural Wonder nyika
#4 Aurora Borealis / Mwenje yekuchamhembe Aisirendi 3,362,055
#5 Sahara Northern Africa 2,661,348
#6 Galapagos Islands Ekwadho 2,012,669
#7 Mount Everest China / Nepal 1,793,316
#8 Danube Delta Romaniya 1,499,237
#9 Gungwa Rakafa Jorodhani / Israeri 1,288,628
Chishamiso chechisikigo nechinonyanya kufarira pa Instagram ndeche Niagara Falls, iri pa boarder reCanada neUSA, ine pamusoro 5.7 mamirioni ema hashtag pa Instagram.
Mufananidzo wechikwereti: Andrew Opila / Shutterstock
Yakashongedzwa seinonyanya kushamisa Instagram kushamisika kwepasirese, Yosemite National Park yakamhanyisa kungonyara kwe5,000,000 Instagram hashtags pane inozivikanwa social media app.
Inofungidzirwa kuti inomiririra simba, kushingirira uye kudzikama, Yosemite National Park muAmerica inogara mazana emamita mativi emamita ezvishamiso, kubva kune mapopoma ane nyasha kusvika kumasango anoshamisa nemipata. Avo vanoshanyira kushamisika kwechisikigo vanozadza chikafu chavo nemapikicha akatarisana neanovhundutsa asi anokwezva echando uye pakakwirira. Neye apo neapo kubatanidzwa uye pikicha yemuchato yakakandwa mukati, Yosemite inoratidzika kunge inzvimbo yakakwana yechirangaridzo chisingakanganwike uye mhiko kupfura.
Kuiisa sechipiri Instagrammable kushamisika kwechisikigo pasirese, Niagara Falls yakaunganidza inoshamisa 4,607,444 hashtags pa Instagram.
Nenzvimbo zhinji dzevashanyi dziri munzvimbo dzakapoteredzwa nenzvimbo, zviuru zvinomhanyira kunzvimbo yeCanada zuva nezuva kuona mapopoma emvura anopenya ari ipapo ndokurova poo pamberi pembiru yechipiri pakureba kwazvo papasi.
Mufananidzo wechikwereti: Jim Mallouk / Shutterstock
Yakagadzirwa se "chinhu chikuru kuona maAmerican ese achifanira kuona" naTeddy Roosevelt, hazvishamise kuti Grand Canyon inoisa seyechitatu chinoshamisira Instagram kushamisika kwepasirese.
Pamakiromita 277 kureba, iyo inoshamisa geological kushamisika inoshanyirwa neanosvika mamirioni matanhatu evashanyi pagore, saka hazvishamise iyo inodziya ombre nzvimbo yakamisikidzwa kanopfuura zviuru zvina nemazana mana ezviuru pa Instagram kusvika ikozvino. Yakavezwa zvakagadzirwa nemasikirwo, Grand Canyon inozivikanwa nekuve imwe yeakaomesesa asi shaya-ichidonhedza zvishamiso zvepasirese.
Denga reSahara, Africa
Gwenga rekutanga pane rondedzero, Sahara inogamuchira zita rechina rinonyanya kushamisa Instagram kushamisika kwepasirese, iine anopfuura 2,200,000 Instagram hashtags yakazara.
Ichikwira makiromita mazana matanhatu emakiromita zviuru mazana matanhatu, Sahara inobatana nenyika gumi nembiri dzemu Africa uye inoumba chikamu chimwe muzvitatu chenyika yese! Matunduru anofadza ane musha kune mhuka dzinopfuura makumi manomwe dzakasiyana, zvakadaro kushamisika kwechisikigo kunoramba kuchizivikanwa nekunyarara kwayo kwakadzikama uye kudzikama kunoshamisa.
Mufananidzo wechikwereti: aaltair / Shutterstock
Iyo Danube Delta muRomania yakakomberedza shanu dzakanakisa kwazvo Instagrammable mashura ezvisikwa, ichitora dzakakura 1,638,573 hashtags pa Instagram.
Yechipiri pakukura zverudzi rwayo muEurope, iyo Danube Rwizi Delta chimiro chevhu chakaumbwa kubva kune yakaiswa sediment inotakurwa nerwizi ichienda mumakungwa akapoterera. Rwizi runoita bhuruu runokwezva vazhinji vevashanyi, vazhinji vacho vanonyora kushanya kwavo nechisungo Instagram pikicha yavo pachavo vachinakidzwa nerwendo rwekuzorora kwechikepe kana nekutapa mhuka dzesango dzakarikomberedza.
Kudonha kushomeka kwepamusoro mashanu, iyo Galapagos Islands inoisa sechitanhatu kwazvo Instagrammable zvakasikwa kushamisika, iine 1,612,457 hashtags kubva kune vashanyi.
Yakavakirwa muEcuador, maGalapagos Islands anogara kunzvimbo zhinji dzekuputika uye anozivikanwa nekuzivikanwa kwavo muDarwin dzidziso yekushanduka-shanduka. Uyezve, izvo Zvitsuwa zveGalapagos zviri padyo neiyo equator, zvichireva kuti vashanyi vanogona kunakidzwa nemamiriro ekunze anodziya gore rese!
Ipo zviwi pachazvo zvichiita senzvimbo dzinoyevedza, mazhinji Instagram med mapikicha echishamiso chechisikigo anoratidza zvisikwa zvemugungwa zvinowanikwa imomo, zvichigadzira ichi chisikwa chisikwa nzvimbo yakanaka kune avo vanoda mhuka dzesango!
Mufananidzo wechikwereti: sanyanwuji / Shutterstock
Crown seye Instagram yechinomwe inonyanya kuzivikanwa kushamisika kwechisikigo, Ha Long Bay muVietnam yakaiswa hashtagged inoshamisa 1,243,473 times.
Inopa vashanyi mapako makuru, emerald emvura uye zvitsuwa zvakavezwa kubva kumatombo, Ha Long Bay inzvimbo inozivikanwa kwazvo yekukwira, scuba diving uye kufamba. Nemhomho yemhuka dzesango dzegungwa uye shongwe dzedombo rakakanganiswa, gadziriso yemusikirwo yeHa Long Bay inogadzira pikicha-yakanaka gungwa revashanyi vari kutsvaga kusimudzira chikafu chavo.
Zvirinani kuzivikanwa seMwenje yeNyasi, iyo Aurora Borealis muIceland inogamuchira zita rechisere kupfuura Instagrammable yechisikigo kushamisika pasi pano, ichigamuchira 1,167,915 hashtags parizvino.
Yakatumidzwa zita ramwarikadzi weRoma wemambakwedza, matenga eAurora Borealis anoshongedzwa nekuratidzwa kwakajeka kwechiedza pahusiku, husiku husiku. Kunyangwe zvisingafungidzirwe, vashanyi vane rombo rakaringana kuona chiitiko ichi vanoona chimwe chezvishamiso zvakasikwa zvepasirese, nekutamba nzizi dzechiedza chinopenya mudenga rakajeka.
Nekuda kwekuti mwenje wekuchamhembe unongogona kutorwa chete kana mamwe mamiriro achienderana, hazvishamise kuti Aurora Borealis inorongedza mashoma ma hashtag kupfuura mamwe mashura echisikigo!
Gomo Everest, China / Nepal
Mufananidzo wechikwereti: Anton Rogozin / Shutterstock
Iine 1,125,527 Instagram hashtags akazara, Gomo reEverest rakatumidzwa zita rechipfumbamwe rakawanda Instagrammable kushamisika kwechisikigo pasirese.
Segomo refu pakureba pasi, rakamira pakanaka mamita makumi maviri nemazana mana pakureba, Gomo reEverest ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi pasi pano. Vachida kutora nzvimbo dzakakwirira dzakanaka, vashanyi vanotora kuenda ku Instagram kazhinji kuti vagovane maonero anoorora.
Zvishoma nezvishoma kuisa munzvimbo yepamusoro gumi nemazana mazana mana nemazana mana nemakumi mana nemakumi mana nepfumbamwe emapashtag, Pamukkale muTurkey ndiyo yegumi yakanyanya kushamisika mu Instagrammed yepasirese, ichiswededza runyorwa kusvika kumagumo
Nemashizha echando machena machena, materu akajeka, uye makungwa ane mukaka, madziva emhepo aPamukkale anokwezva vashanyi kubva pasirese uye akakunda zvikuru ma Instagrammers anotarisa kunatsiridza mafirita avo eesthetic.
Zvichakadaro, zvikwangwani zvinoshamisa seKomodo Island, iyo Great Barrier Reef uye maCliffs eMoher ese akaiswa padanho repamusoro gumi, achigamuchira maahththag 83,569, 817,956 uye 635,073, zvichiteerana.
Lotte Mahotera & Mahotera Mazita Nyowani CEO weAmerica
Seychelles Inogamuchira Kuzorora kweMafambiro Ekurambidzwa ...